Semalt: I-News Web Scraping Tool
Ukuchithwa kweendaba ezivela kwamanye amawebhusayithi kunokuba isicwangciso esisebenzayo kubasebenzisi bafuna ukugcina ixesha elifanelekileyo ngokuhlalutya iziganeko zangoku. Kukho izigidi zeendawo zendaba kwi-net apho abasebenzisi bangakwazi ukubeka iliso ulwazi abayidingayo. Kwezinye iimeko, banokufuna ukutshiza umxholo wewebhusayithi njengamaqendu malunga nemveliso ethile, iinkampani okanye abantu. Abanye babo bangadinga ukukhupha ingcamango ngaphandle kwewebhu. Nangona kunjalo, iiwebhusayithi zeendaba zinephepha elininzi, elingenakuhlaziywa kwaye likopishwe ngesandla. Kukho izixhobo ezininzi umsebenzisi angasebenzisa ukutshiza umxholo wewebhu ngokuzenzekelayo.
Omnye unokuzibuza ukuba yeyiphi indlela efanelekileyo yokutshiza idatha. Okubalulekileyo, abantu kufuneka bafumane uludwe lwee-URL ezithile ezifuneka zikhutshwe kwimixholo. Uninzi lwezixhobo ezixakekayo kwiwebhusayithi zibaququzeli abafuna ukuqokelela ulwazi lwewebhusayithi. Xa u "gcoba" aba bahlaseli bewebhu kunye neenlist zewebhsayithi abafuna ukuzenza, unokufumana iziphumo ezintle! Kwezinye iimeko ezikhohlakeleyo, ii-webmasters zithatha ukubamba i-bots yazo kwezinye iiseva. Unokudinga ukusingatha ithuluzi lakho lokukrabhu kwiwebhu kwiseva yesithathu ukuze wenze i-automate enye yale miyalelo.
Enye yezona zixhobo ezinokubaluleka kwiwebhu yiWebhose.io. Ukuyisebenzisa, unokukhuphela iwebhusayithi yonke kwaye uyigcine kwi-hard drive yakho yangaphandle ukufikelela ngaphandle. Isayithi kwi-drive ekhuni iphendula ngokukhawuleza kuba ayixhomekeke kwisantya sokuxhumeka kwe-intanethi okanye impendulo yakho ye-bandwidth response. Ngaphezulu, i-web crawlers ikhupha izigidi zamaphepha ewebhu ngosuku. Inkqubo yendabuko yokugcina iphepha lewebhu iyancipha kwaye ingenakusebenza kumaziko anamaphepha amaninzi. Ngokomzekelo, ungasebenzisa i-bots ukukhangela iindaba ezifana 'nohambo luka-Obama.' Ezi zixhobo zifuna lonke ulwazi oluyidingayo kwaye zilondoloze umsebenzisi ixesha elininzi kunye nemali.
Izixhobo zokuqhafaza kwiWebhu zineenketho yokuzenzekelayo ezinye izinto ezizixhaphazayo. Ngokomzekelo, abasebenzisi bangasetha ishedyuli yokutshiza. Kwakhona, kunokwenzeka ukwenza abaqwenguli baqokelele ulwazi lwewebhusayithi kwixesha elide lokumiselwa. Abasebenzisi besixhobo esinjalo banandipha izinto ezithile ezipholileyo ezifana nezicwangciso zokulanda. Ngaloo ndlela ungakwazi ukufaka lula okanye ukukhuphela iindawo zewebhu ezifuneka zikhutshwe.
Ukukhwa kwewebhusayithi akuyiyo isayensi ye-rocket! Into kuphela oyifunayo kukuba usebenzise ithuluzi lokuchithwa kwewebhu. Abasebenzisi bangafumana idatha ehleliweyo kwiwebhusayithi kwaye bayigcine kwi-hard drive ukuze bayisebenzise kwikamva. Ngokomzekelo, unokhetho lokufumana amanqaku eendaba nakwezinye iiwebhusayithi uze uwasebenzise kwezinye iisayithi. Inqaku le-SEO linika ulwazi olunzulu malunga nendlela yokwenza iindaba zakho zenze amava njengamnandi njengoko kunokwenzeka Source .